Tanana am-baravarana, Tanan-varavarana fitaratra, Tanan-varavarana ao anaty - YALIS
Iza no Design YALIS
YALIS Design dia mitarika mpanamboatra manokana amin'ny fitaovana am-baravarana ho an'ny varavarana. YALIS Design, dia marika mazàna ho an'ny zara-by zina firaka zinc ary vahaolana ho an'ny varavarana matihanina manana traikefa 10 taona mahery.
Inona avy ireo vokatra maininay
YALIS Design vokatra am-baravarana lehibe tahony dia eo afovoany sy avo eo an-tsena miaraka amina endrika tsy manam-paharoa sy milamina kalitao, ary koa manome mpanjifa vahaolana matihanina varavarana varavarana.
Famokarana manan-tsaina YALIS
YALIS Design dia manana ozininy manokana. Mba hanatsarana tsara kokoa ny famokarana, dia nametraka fitaovana famokarana mandeha ho azy sy rafitra fitantanana ISO tamin'ny taona 2020 ny YALIS.
Vahaolana matevina amin'ny valiha fitaratra varavarana fitaratra
Miaraka amin'ny lazan'ny fomba minimalista dia nanjary tian'ny mpanjifa tsikelikely ny varavarana fitaratra fitaratra. Na izany aza, ny ankamaroan'ny hidy varavarana fitaratra eo amin'ny tsena dia tsy mety amin'ny varavarana fitaratra manify. Mba hamahana ity olana ity, YALIS dia nandefa hidy varavarana fitaratra varavarana kely sy vahaolana vahaolana amin'ny varavarana fitaratra fitaratra.
Vahaolana Hardware Hardware Minimalista
Amin'ny maha mpamatsy vahaolana avo lenta varavarana avo lenta azy, YALIS dia nanamboatra hidin-trano famarana varavarana minimalist ho an'ny varavarana minimalist (varavarana tsy hita maso ary varavarana haavo amin'ny valindrihana). Miaraka amin'ny hidy varavarana minimalist ho toy ny votoatiny, ny YALIS dia mampiditra vahaolana vahaolana amin'ny minimalist varavarana.
Vahaolana Hardware Hardware Door Wood
YALIS dia namolavola hidy varavarana maoderina anatiny sy hidin-trano mihidy mora vidy arakaraka ny hatsaran'ny tanora sy ny filan'ny mpanamboatra varavarana, manome vahaolana isan-karazany amin'ny varavarana hazo ho an'ny mpanjifa.
Vahaolana momba ny varotra varavarana ekolojika
Ny varavarana ekolojika, fantatra ihany koa ho toy ny varavarana hazo vita amin'ny aliminioma, amin'ny ankapobeny dia manana haavony eo anelanelan'ny 2,1m sy 2,4m, ary ny sisin'ny vavahady dia azo ampifangaroina maimaimpoana sy hatakalo amin'ny zana-baravarana. YALIS dia namolavola vahaolana momba ny varotra ekolojika mifototra amin'ireo toetra ireo.
Vahaolana Hardware Hardware Door ao Amin'ny Ankizy Ankizy
YALIS dia mijery ny fiarovana ny ankizy ao amin'ny efitrano, toy ny fanidiana tsy nahy, fianjerana anaty trano, lozam-pifamoivoizana tampoka sns. Noho izany, YALIS dia namorona hidin-trano hidin-trano ho an'ny varavaran'ny efitrano ho an'ny zaza, izay ahafahan'ny ray aman-dreny manokatra varavarana haingana rehefa tandindomin-doza ilay zaza.
Niditra an-tsitrapo tao amin'ny indostrian'ny fampitaovana am-baravarana nandritra ny 20 taona mahery izy ary mahay amin'ny firafitry ny fitaovana isan-karazany amin'ny varavarana. Nandritra ny 20 taona mahery, nanangona traikefa manankarena amin'ny fampiroboroboana ny firafitra sy fahalalana lalina momba ny fitaovana am-baravarana izy ary mampivelatra ny vokatra arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Amin'ny maha injenieran'ny YALIS azy dia mifehy fatratra ny dingana rehetra amin'ny asany isan'andro izy mba hahazoana antoka ny haavon'ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra. Ankoatry ny fiantohana ny haavon'ny asa tanana sy ny kalitaon'ny vokatra dia mampivelatra tsy tapaka ny asa tanana vaovao koa izy mifanaraka amin'ny filan'ny tsena sy ny mpanjifa.
Izy dia mahazo aingam-panahy amin'ny fiainana andavanandro, mampifangaro ny fironana lamaody ankehitriny, ary mampiasa ny tsy fitovizan'ny fitaovana sy ny famaranana ny tany mba hahatonga ny vokatra ho henjana kokoa nefa koa kanto kokoa, ary manakaiky kokoa ny minimalism.
Mametraka ny hafanam-pony amin'ny famolavolana vokatra tsirairay izy, mikatsaka zavakanto mandrakizay sy kely, ary miaro fiainana mamorona sy tsotra. Ny fahatsapana tsipika tsy manam-paharoa no mampiavaka azy, ary maniry hanova ny foto-kevitra am-boalohany ho vokatra enta-mavesatra kanto izy.
Miandrandra ny ho avy, YALIS dia ...
Teny fampidirana: Ny fikorontanana nateraky ny COVID-19 dia nahatonga ny orinasa tsy hihetsika intsony amin'ny jiro amin'ny faran'ny tionelina, fa nibolisatra tao anaty zavona mba hivoahana. —— nataon'ny Antenimieran'ny Varotra eropeana any Chine Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nipoaka ny COVID-19. Amin'izao fotoana izao, ny ep manerantany ...
CIDE 2021 Tonga toy ny fandaharam-potoana, YALIS Wa ...
Ny Ara ny fanamboarana trano manontolo dia ho avy miaraka amin'ny fanatsarana ankapobeny ny haavon'ny fanjifana sy ny fanavaozana hatrany ny foto-panjifana, ny fanaingoana amin'ny trano iray manontolo dia nanjary zava-misy tsy azo ovaina amin'ny fanjifàna ao an-trano. Sina dia firenena manana karazan'olona betsaka ...
Ny fahaterahan'ny tantanana varavarana
Isaky ny manindry ny vodin-trano ianao hanokatra varavarana, efa nieritreritra ny dingana tokony handalovan'ity vavahady varavarana ity ve ianao alohan'ny hiseho eo imasonao? Ao ambadiky ny vodin-trano tsotra dia misy ny ezaka mafy ataon'ny mpamolavola sy ny fahaizan'izy ireo m ...